Musharax Qurbaawi oo Muhiimada Maalmaha Xoriyadda ka hadlay (Akhri) – Radio Daljir
Musharax Qurbaawi oo Muhiimada Maalmaha Xoriyadda ka hadlay (Akhri)
Luulyo 2, 2018 5:42 g 0
Umad waliba waxay leedahay taariikh ay ku faanto iyo munaasabado ku dheer oo lama ilaawaan ah, kuwaasoo la xuso lagana sheekeeyo halgamadii iyo maalin waliba waxay wanaag iyo tiiraanyo umada u leedahay.
11 Janaanyo 1948: Waxaa dhacay dagaalkii Hanoolaato, maalintaas waxaa dibad bax ka dhacay magaalada Muqdishu.
Dhacdadaas dadkii Soomaalida ka shahiiday waxaa ka mid ahaa Xaawo Taako oo astaan u noqotay gumeysidiidka iyo midnimada.
11-kii Janaayo 1948-dii waxaa dalka soo booqanayey guddi UNda raacsan oo ahaa dalalkii ku adkaaday dagaalkii labaad ee Aduunka sida Maraykanka, Ingiriiska, Faransiska, Ruushka, iyo Talyaniga. Maalintas waxay adeegsadeen dadka dabadhilifka ah.
SYL, waxaa ay sameeyeen tab la yaab leh, boqolkii qofba waxaa loo dhiibnay hal hogaamiye , labo calanka side iyo afar ilaalo ah.
Dagaalkaas Hanoolaato waxaa Soomaalida ka shahiiday 14 oo ay ku jirto Xaawo Taako, halka Talyaaniga laga dilay 52 Talyaani ah, waxaana la uruuriyay gumeystihii.
September 1949 ayaa waxaa furmay kalfadhigii golaha guud ee Qaramada Midoobay, kal-fadhigaas ayaa laga sugayey inuu go’aan ka gaaro aayatiinka dalalkii Talyaanigu gumeeysan jirey oo ay Soomaaliya ka mid ahayd. Leegada waxay magaalada New York u dirtay Cabdilahi Ciise Maxamud si uu cabbiro Mawqifka SYL .
October 5, 1949 ayey SYL mudaaharaad ka dhan ah Talyaaniga ku sameeysey goobta loo yaqaan Dhagaxtuur.
Dagaalkan Dhagaxtuur, Waxaa uu dhex maray Soomaalida iyo Ingiriiska, dowladda Ingiriiska waxaa ay is bidday xoog, Waxaa ay bandow kusoo rogtay dadka, kadib waxaa Dhagaxtuur bilaabay Soomaalidii, dagaal is burbursi ah kadib,. Waxaa halkaas ku dhintay laba qof, waxaana ku dhaawacmay 50. Afar booliska Ingiriiska ah ayaa halkaas lagu dhaawacay.
November 21, 1949 ayey golaha guud ee qaramad midoobay soo saareen go’aankiisii ahaa in Soomaaliya loo dhiibo maamul Talyaani ah oo 10 sano ah, Qaramada Midoobayna ku ilaaliyaan.
Bishii April 1950 ayey dowladda Talyaanigu la wareegay maamulidda koofurta Soomaaliya, waxaa Talyaaniga weheliyey guddi ka kooban saddex dal oo kala ahaa: Masar, Philibin iyo Colombia, dalalkan ayaa wakiil uga ahaa Qaramada Midoobay, ilaalinayeyna sida Talyaanigu u fulinayo shaqada loo dhiibay.
SYL waxaa ay sidoo kale ku guuleysatay 12ka Oktoobar 1954 in la taago calanka Soomaaliya kaas uu sameeyay Allaha u naxariistee Maxamad Cawaale Liibaan.
Gobollada waqooyi ee dalka ama Somaliland, waxaa ay galeen halgan dheer, iyagoo ku guuleystay markii dambe in la siiyo xuriyad.
Maalmo kadib,waxaa magaallada Muqdishu lagu soo gabagabeeyay shir 6 maalmood u socday waftigii waqooyi iyo kan koofur, Labada dhinac waxaa ay isku afgarteen in 1 July 1960-ka la midoobo oo Waqooyi iyo Koofur ku midoobaan Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Ugu Dambeyntii guushii halgankii waxaa la gaaray 1da July 1960 markii labadda gobol oo Soomaaliyeed Midoobeen oo dhiseen Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Maalinta ay xuriyadda qaadatay koofura Soomaaliya, isla markaana ay midoobeen labadii gobol ee Waqooyiga iyo Koofurta Soomaaliya waxaa yimid wafdi ka socota goboladii kale ee ku haray gacanta gumeystaha.
Dhanka Xeebta Soomaaliya(Djabuti) Waxaa ka yimid halgamaagii weynaa ee Maxamud Xarbi, Waxaa kaloo joogay Mas’uulyiinka ka timid gobollada Koofur Galbeed iyo NFD.
Maalintaas waxaa xoog u kacay dareenkii umadda, Waxaa mar kale lasoo nooleeyay firkadii Pan-Somalism ama Somaliweyn.
Inkastoo xaalado Kala Duwan Ka Dambeyeen Darreenkii Qaaliga Ahaa iyo daruufo coladeed, qaxooti, khilaaf, burbur iyo wiliba kala Shaki ku ku yimid Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed Dadkeeddii, hadana maalinta aad hesho xoriyad loo soo maray halgan waxay leedahay xusuus gaar ah,Taasoo Ay Sii Dheertahay iftiinka Maanta Aynu Nasiibka Ku Helnay iyo Maanta Dawladda Wanaaga iyo Himilada Ee Inoo Dhalatay Siday Ahaataba Shacabkaygii
W/Q Musharax Madaxweyne 2019 Siciid Axmed Cali Qurbaawi
Faah faahin 9 qof oo ku sumoobay Caano ay cabeen (dhegayso)